SystemNet Tech Co., Ltd. - Computer Networking Center in ရနျကုနျ
SystemNet Tech Co., Ltd.
Computer Networking Center in ရနျကုနျ
Get QuoteCall 09 975 560652Get directionsWhatsApp 09 975 560652Message 09 975 560652Contact UsFind TableMake AppointmentPlace OrderView Menu
EnGenius Device မြားကို SystemNet Tech Co., Ltd မှာ စြေးနှုနျးခြိုသာစှာ မှာယူနိူငျပါပွီနျော မိတျဆှေ မြားရဲ့ အခကျအခဲမြားကို SystemNet Tech Co., Ltd မှ EnGenius Certified Engineer မြားမှ တာဝနျယူ ဖွရှေငျးပေးသှားမှာဖွဈပါတယျခငျဗြာ ...
EnGenius Device များကို SystemNet Tech Co., Lt...
LETO Ransomware Virus (2019)
LETO ransomware virus ဟာ STOP/DJVU virus (v0172) ရဲ. နောကျဆုံးဗားရှငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ AES+RSA cryptography method ကိုအသုံးပွုပွီး ransomware တိုကျခိုကျခံရတဲ့ ကှနျပြူတာနဲ. နကျဝကျအတှငျးမှာ ရှိတဲ့ data တှကေို .leto file extension နဲ.ဆုံးတဲ့ file name
အမှတ် ၂၇ ၊ ပြည်လမ်း ၊ လှိုင်မြို.နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို.တွင် တည်ရှိသော မြန်မာနိူင်ငံ အမျိုးသား လူ.အခွင့်အရေးကော်မရှင် (Myanmar National Human Rights Commission) ၏ ရုံးဆောင်သစ်တွင် Wireless Network စနစ်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် Engenius Wireless Devices များဖြင့် တပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်စွာ အပ်...
မြောက်ဥက္ကလာ ၂ ရပ်ကွက် စိန်ပန်းမြိုင် မှာရှိတဲ့ Taw Win Family Company Limited ၏ Batching Plant တွင် ကျွန်တော်တို. SystemNet Tech Co., Ltd. မှ IP Camera များနှင့် Starlight PTZ camera များကို တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည် .. ယခုလို ယုံကြည်စွာ အပ်နှံပေးသော Taw Win Family Company Limited မှ လူကြီးမင်းများအား အထ...
If you are looking for perfect IT services for your business, you will find them here! We provide everything from deployment and maintenance solutions, to equipment repair and held desk services. SystemNet provides reliable, quick and cost-effective service using professional, experienced IT support staff. Our business computer support services make sure the technology your company relies on is performing its best and contributing to your ongoing success with carefully managed costs, instead of slowing you down and eating up limited resources.
· Always Learn
To be the best ICT service provider for our valuable customers and to be ethically trusted partner in the industry.
Customer satisfaction is our key success factor.
09 975 560652
Thiri Mingalar Road